HP Omen X 2S, imwe yepakombiyuta yepamutambo ine mawindo maviri - TELES RELAY
HOME » TECH & TELECOM »HP Omen X 2S, imwe yepakombiyuta ine mawindo maviri
Iye zvino iyo PC yekutambisa laptops inenge yakakwana uye yakasimba kwazvo, iwe unofanira kumira kunze. HP inobudisa HP Omen X XUMUMS, ine skrini yechipiri uswa hwefoni.
The Touch Bar Apple MacBook Pro haisi chete emulators asi yakatanga pfungwa yokuti chikamu chikamu chinogona kubatanidza se "screen" yechipiri kuti iratidze zvimwe zviri mukati. Asus akatora pfungwa yacho zvakare muZenbook Pro 15 nechishuwo chekubata pane nzvimbo yepadeppad. Zvakadini Omen X XUMUMS ?
Heino HP Omen X 2S ghuku rekushandisa
Icho chiri nechomukati chekuongorora iyo HP inoruramisa nzira yayo. Vatambi vakawanda vanobvumirana kuchengeta smartphone yavo pedyo nekombiyuta yavo kuti vawane mavhesi kana kuti vatarise zvavanenge vachiita. Pfungwa iyi naOmen X 2S uye yechikwata chechipiri ndeyekubvumira kusiya smartphone iyo iyo.
Zviri pachena kuti HP yakapfuurira mberi mukubatanidzwa kwayo. Iyi 6 Full HD slab inogona kuratidza minimap uye / kana kuverenga mumimwe mitambo. Kubata, zvinogonawo kuedza kupfura mune vamwe vapfuri kana kuratidza zvishandiso zvekushanda. Ikopo kunyange kiyi yakatsaurirwa kuti utumire mawindo akazaruka uye akashanda kumakona makuru.
ine chinyorwa chechipiri che 6 pamusoro pebhokisi
Cherechedza, kuti ukwanise kukodzera ichi chinyorwa, zvaidiwa kuburitsa bhokisi rebhokisi pacharo. Chizorora chemuchindwe chakanyangarika. Asi kuti uite zvinhu zvakarurama, HP inopa iyo inogona kusvibiswa nePC. Nzira yemigwagwa, panguva iyi, inotora nzvimbo yekombiki yechirungu - inopera zvakare -.
Nezveshoko nokurondedzerwa of HP semhanza X 2S, taigona kutaura kwayo Hz IPS Panel 144 15,6 padiki Full HD-enderana G-Sync (IPS 4K rakanyorwa 240 Hz ndiye optional), kusvikira mumwe Core i9 (chizvarwa repfumbamwe ), mumwe Max-Q RTX 2070 kana 2080 RTX-Max-Q uye kusvikira 32 GB of RAM. Kuchitonhora chikara, a "5 nzira" Gadziriro riri basa. Pane kunyange sezvo chafariz namatidza mvura simbi pamusoro GPU uye CPU.
The HP semhanza X 2S akatengesa kubva € 2 100. The muenzaniso pamwe Intel Core i9 mwoyo 8, 2080 RTC Max-Q, 16 uye 1 SAADD GB TB pamusoro SSD rinosvika Zvichakadaro 2 700 €.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.begeek.fr/hp-omen-x-2s-un-pc-portable-gaming-avec-deux-ecrans-316137
Minecraft Earth: Microsoft formalizes ayo chaizvoizvo kwakawedzera mutambo musi Android uye iOS - PhonAndroid.com